မော်ဒယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အဓမ္မပြုကျင့် နှိပ်စက်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသော အဆိုတော် အစ္စဏီအ - Yangon Media Group
မော်ဒယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အဓမ္မပြုကျင့် နှိပ်စက်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသော အဆိုတော် အစ္စဏီအ
ပြင်ဦးလွင်မြို့သည် ငြိမ်းချမ်းနေပြီဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ ဧည့်သည်များ လာရောက်လည်ပတ်ရန် ဒေသခံများဖိတ်ခေါ်
နားမကြားသောကလေးများအတွက် အစိုးရမှထောက်ပံ့မှုများ ပေးထားသော်လည်း လိုအပ်ချက်များရှိနေဆဲ
အလုပ်ထုတ်ခံတိုင်ကြားမှုများကို ခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ ကောင်စီတို့ဖြင့်သာ ဖြေရှင်းပေးရေးအပါအဝင် တောင်းဆိုချက် များဖြင့် အလုပ်သမားများ ထောင်ချီဆန္ဒထုတ်ဖော်
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ယာယီပိတ်ထားသည့်ကျောင်းများအနက်မှ (၅၅) ကျောင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထား
ရန်ကုန် ၊ ဧပြီ ၂၆
မော်ဒယ်အမျိုး သမီးတစ်ဦးကို အဓမ္မပြုကျင့် နှိပ် စက်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသော အဆိုတော်အစ္စဏီအား ဒုတိယ အကြိမ် ရုံးထုတ်ရမန်ယူခဲ့သည်။ ဧပြီ ၂၆ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ယာဉ်ဖြင့် အဆိုတော် အစ္စဏီအား တာမွေမြို့နယ် တ ရားရုံးသို့ခေါ်ဆောင်ပြီး ဒုတိယ အကြိမ် ရုံးထုတ်ရမန်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တာမွေမြို့နယ်တရားရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ”ဒုတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်ရမန်ယူတာ။ အမှု တည်ဆောက်စဉ်ကာလအတွင်းမှာ ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရဲက ချုပ်ရက်တစ်လရတယ်။ ရက် ၃ဝ ရတော့ အမှုကိုတည်ဆောက်ပြီး ဥပဒေနဲ့အညီ တရားစွဲတင်မှာပေါ့” ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။ ရုံးချိန်းကို မေ ၁ဝ ရက်သို့ ပြန်လည်ချိန်းဆိုထားပြီး ဥပဒေအ ကြံပြုချက်အရ မည်သည့်တရားရုံး၌ တရားစွဲတင်ရန် ဆောင်ရွက် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက် ပြောသည်။ ယနေ့ရုံးချိန်းတွင် အဆိုတော် အစ္စဏီသည် မျက်နှာ Mask အုပ်လာပြီး ရုံးထုတ်လာစဉ် သတင်းမီဒီယာများ၏မေးမြန်းမှုကို ၎င်းက တစ်စုံတစ်ရာ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
ယင်းဖြစ်စဉ်မှာ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၁ ရက် ညပိုင်းက မော်ဒယ် စူးရှထက်(ခ)မဇာခြည်ဌေး (၂၇နှစ်) သည် သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ဆယ်လီအရက်ဘားသို့ ရောက်နေစဉ် ဧပြီ ၁၂ ရက် နံနက် ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူ အဆိုတော် ကိုဟန်ထွန်းဇော်(ခ) အစ္စဏီ(၃၂နှစ်)မှ ဘားအတွင်းဝင် ရောက်ပြဿနာရှာနေသဖြင့် စူးရှ ထက်(ခ)မဇာခြည်ဌေးမှ ၎င်းငှား ရမ်းနေထိုင်သည့် တာမွေမြို့နယ်၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်ရှိ တိုက် ခန်းသို့ ကားငှား၍ပြန်လာရာ ကိုဟန် ထွန်းဇော်(ခ)အစ္စဏီမှလည်း ၎င်းယာဉ်ဖြင့် အတူလိုက်ပါလာခဲ့သည်။
နေအိမ်သို့အရောက်တွင် ကိုဟန်ထွန်းဇော်(ခ)အစ္စဏီမှ စူးရှထက်(ခ)မဇာခြည်ဌေး၏ အင်္ကျီအား အတင်းဆွဲချွတ်သဖြင့် ရုန်းကန်စဉ် ဦးခေါင်းဖြင့် မှန်ဗီရိုအားတိုက်မိခဲ့၍ ဦးခေါင်းနာကျင်ခဲ့သည့်အပြင် တစ်ကိုယ်လုံးအား ဖျစ်ညှစ် ခြင်း၊ ယာလက်ညှိုး၊ လက်ခလယ် နှင့် လက်သူကြွယ်တို့၏ လက်သည်း ခွံများကို လှန်ချိုးသဖြင့် နာကျင်၍ သတိမေ့နေစဉ် အဓမ္မနှစ်ကြိမ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း၊ သတိရလာ၍ ပတ်ဝန်းကျင်အား အကူအညီတောင်းခံ ရန် ကြိုးစားရာ ကိုဟန်ထွန်းဇော် (ခ)အစ္စဏီမှ ၎င်း၏ယာခြေထောက်အား ဗီရိုမှန်ကွဲစဖြင့် ခြစ်ခဲ့သဖြင့် ပြတ်ရှဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် အိမ်သာအသုံးပြုမည်ဟု အကြောင်း ပြကာ အိမ်သာတံခါးအား လော့ချ ပြီး သူငယ်ချင်းထံ ဖုန်းဖြင့်ကူညီ တောင်းခံခဲ့ရာ နံနက် ၅ နာရီခွဲ တွင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအ ဖွဲ့များ ရောက်လာခဲ့ကြောင်း ပြည် ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
ယင်းအမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဆိုတော် ကိုဟန်ထွန်းဇော်(ခ) အစ္စဏီကို တာမွေမြို့မရဲစခန်းမှ (ပ)၃၆၂/၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ-၃၇၆/ ၃၂၅/၃၂၄ (မုဒိမ်း မှု/တုံးသော လက်နက်ဖြင့် ပြင်း ထန်နာကျင်စေမှု/ချွန်သော လက်နက်ဖြင့် သာမန်နာကျင်စေ မှု)ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့သည်။
ညောင်ဦးမြို့တွင် လယ်ယာမြေနှင့် နွားစားကျက်များ ဈေးကောင်းရ၍ ရောင်းဝယ်နေကြသောကြောင့် စား
မူဆယ်မြို့နယ် မူဆယ်-လားရှိုး ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးပေါ်၌ ရှေ့ထွက်မိုင်းနှစ်လုံး ထပ်မံတွေ့ရှ?
နေပြည်တော် စည်ပင်ရိပ်သာဗုံးလန့်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က အမှုဖွင့်ထားသည့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်များကို တစ်လကျော်ကြာသည်အထိ ခြေရာခံ မမိသေးဟုဆို
ပုသိမ်မြို့၌ လမ်းသွားလမ်းလာများကို အုပ်စုဖွဲ့ ရိုက်နှက်ရမ်းကားခဲ့သည်ဟုဆိုသူ လူငယ် ၁၀ ဦးကို ဖမ်းဆီးပြီး ပုဒ်မ ၁၁ ခုဖြင့် အမှုဖွင့်
မွန်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တွင် သဘာဝ အလှအပနှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများ လေ့လာနိုင်ရန် အပျော်စီးခရီး
ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေသော ယီမင်နိုင်ငံတွင် ဝက်တုပ်ကွေးကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွား
အိန္ဒိယတွင် ဖန်နီ မုန်တိုင်းကြောင့် မြို့အများအပြားပျက်စီး၊ ရှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရ
စတော့အိတ်ချိန်းရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ရန် Account ဖွင့်လှစ်သူ သုည ဒသမ ဝ၇ ရာခိုင်နှုန်းသာ??
အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် စစ်ဆင်ရေးနှင့် လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်သွေးကြွ ၁၈ ဦး သေဆုံး
မန္တလေးတွင် အကြီးဆုံး MACHINE MART ဖြစ်သော ကျင်းလုံ- မြန်မာ စက်မှုပစ္စည်း အရောင်ဆိုင်သစ် ဖွင့်ပွဲတွင် ??